သာယာဝတီမြို့နယ်မှ အယုတ်မာဆုံး နှင့် အရက်စက်ဆုံး မောင်နှမချင်း မုဒိန်းကျင့် လူသတ်သမား ဖမ်းမိပြီ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / သာယာဝတီမြို့နယ်မှ အယုတ်မာဆုံး နှင့် အရက်စက်ဆုံး မောင်နှမချင်း မုဒိန်းကျင့် လူသတ်သမား ဖမ်းမိပြီ
သာယာဝတီမြို့နယ်မှ အယုတ်မာဆုံး နှင့် အရက်စက်ဆုံး မောင်နှမချင်း မုဒိန်းကျင့် လူသတ်သမား ဖမ်းမိပြီ
Apann Pyay 8:56 AM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီမြို့နယ် စံရွေးနယ်မြေ နယ်ရဲစခန်းအပိုင်တွင် အယုတ်မာဆုံး နှင့် အရက်စက်ဆုံး မုဒိန်းကျင့် လူသတ်မှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၇ရက်နေ့ တွင် ကျုးလွန်ခဲ့ရာ မေလ ၃ ရက်နေ့ တွင် စခန်းမှူး ရဲအုပ် ဝင်းနိုင် မှ တိုင်ကြားချက် ကို လက်ခံပြီး လူသတ်တရားခံကို ဖမ်းဆီးဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည် ။
ဖြစ်စဉ်မှာ သာယာဝတီမြို့နယ် အိုင်ကဒုံ ကျေးရွာ အုပ်စု ကညင်တပင် ကျေးရွာတွင် မောင်နှမ ( ၂ ) ဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူ မောင်မိုးဝင်း မှ ညီမ ဖြစ်သူ မလွင်မာချို ( ခ ) မီးလေး ကို ၂၇ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက်နေ့ည (၇ )နာရီ အချိန့် တွင် အဖိုး ( အဘေး ) ဖြစ်သူ ဦးချစ်ရွှေ နှင့် နေထိုင်သော မလွင်မာချို အား ဗီဒီယို ကြည့်ရန် အတွက် အဘိုးဖြစ်သူ အား ယုံကြည်အောင် ပြောဆိုပြီး ၊ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တင်ကာ ရွာ၏ အနောက်ဖက် မှ ထွက်သွားခဲ့ပြီးနောက် မြစ်ကျိုးကျေးရွာအုပ်စု နှင့် အိုင်ကဒုံ ကျေးရွာ အုပ်စုကြား တော်ပဲခူး အင်းဖျား ရှိ ပေါက်ပင် အနီးတွင် ရပ်ကာ အနီးရှိ ကိုင်းတော ထဲသို့ တွန်းလဲပြီး သား /မယား ပြုကျင့် ခဲ့သည်။
သား / မယားပြုကျင့်စဉ် အော်ဟစ် အကူအညီ တောင်းသဖြင့် လည်ပင်းကိုညှစ်ခဲ့ပြီး သား /မယား တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ရာ လည်ပင်းညှစ် သော ဒဏ်ကြောင့် လည်စီပြုတ် မေ့မျော သွားခဲ့ပြီး နောက်သတိရရင် တိုင်ကြားမည် ကို စိုးရိမ် သဖြင့် အနီးရှိ မြေကြီးခဲ ဖြင့် ဦးခေါင်း ကို ထုသဖြင့် သေဆုံးသွားပြီးနောက် ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၃ - ၅ - ၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၇နာရီ ကျော် အချိန်ခန့်တွင် ကညင်တပင် ရွာသား ကိုစိုးသိန်းမှာ ဝါရိုး ချိုးရန်အတွက် ရွာမှ ထွက် ခွာလာရာ အပုတ် နံသဖြင့် ကိုင်းတောအနီးရှိ ရှာကြည့်ရာ လူသေ အလောင်းတွေ့ရှိသဖြင့် အနီးအနားရှိ ကိုဖိုးသောကြာ အား ခေါ်ယူပြီး အတူ ထပ်မံကြည့်ရှု့ရာ လူသေ အလောင်းတွေ့သဖြင့် အိုင်ကဒုံကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးကျော်မြင့်ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ စံရွေး နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် ဝင်းနိုင် နှင့်အတူ ကညင်တပင် ကျေးရွာ သို့ ထွက်ခွာ လာခဲ့သည် ။ ကျေးရွာနေ ပြည်သူများမှာလည်း မသင်္ကာစရာ ဖြစ်သူ မောင်မိုးဝင်းကို ပြောသဖြင့် ခေါ်ယူမေးမြန်းရာ ငြင်းဆန်းနေသော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ စစ်ဆေးရေးဗျုဟာ စက်ဝန်းကို မလွန်ဆန် နိုင်ကာ ဥပဒေ လက်တွင်းသို့ သက်ဆင်းကာ (၁၅ )မိနစ် အတွင်း မေးမြန်းဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့သည် ။
ပြစ်မှု့ ကျုးလွန်ခဲ့သူ ကိုမိုးဝင်းကို အခင်းဖြစ်ရာ အရပ် သို့ လိုက်လံပြသရန် အတွက် ပြောဆိုရာ တွင် စခန်းမှူးရဲအုပ် ဝင်းနိုင် နှင့်အတူ အိုင်ကဒုံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်မြင့် မြစ်ကျိုး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်အတူ လိုက်ပါကာ အခင်းဖြစ်နေရာ အား ပြသပြီးနောက် အလောင်းဖေါ်နေချိန် တွင် မလွင်မာချို ( ခ ) မီးလေး အား သူ့ အနေဖြင့် မတရားပြုကျင့်ပြီး သတ်ခဲ့ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးရှေ့မှောက်တွင် ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည် ။
အဆိုပါ ပြစ်မှု့. ကို ကျုးလွန် ခဲ့သော ကိုမိုးဝင်းကို စံရွေးနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ပ/ ၂၃ / ၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၃၀၂ /၃၇၆ ဖြင့်အရေးယူနိုင် အတွက်ရဲအုပ် ဝင်းနိုင် မှ အမှု့ကိုသေခြာ စစ်ဆေးပြီး တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ရှိသည် ။
သေဆုံးသူ မလွင်မာချို အခြေခံပညာ နဝမတန်း ကိုအောင်မြင်ပြီး ယခု နှစ် စာသင် နှစ် ဒသမတန်းကိုတက်ရောက် သင်ကြားမည့် ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျောင်းအပို့အကြို ယခု ပြစ်မှု့ကျုးလွန် ခဲ့သူ ကိုမိုးဝင်းအား အပို့အကြို လုပ်ရန် အဘေးဖြစ်သူ ဦးချစ်ရွှေ မှ စီစဉ်ထားပြီး ကိုမိုးဝင်း မှာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ မောင်းနှင် သူတစ်ဦး ဖြစ်သည် ဟု အိုင်ကဒုံကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်မြင့် က မီဒီယာနှင့် တွေ့ဆုံချိန် တွင်ပြောကြားခဲ့သည် ။
ကိုဖိုးစံ - သာယာဝတီ
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး သာယာဝတီမွို့နယျ စံရှေးနယျမွေ နယျရဲစခနျးအပိုငျတှငျ အယုတျမာဆုံး နှငျ့ အရကျစကျဆုံး မုဒိနျးကငျြ့ လူသတျမှုကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ ၂၇ရကျနေ့ တှငျ ကြုးလှနျခဲ့ရာ မလေ ၃ ရကျနေ့ တှငျ စခနျးမှူး ရဲအုပျ ဝငျးနိုငျ မှ တိုငျကွားခကျြ ကို လကျခံပွီး လူသတျတရားခံကို ဖမျးဆီးဖျောထုတျ နိုငျခဲ့ကွောငျး သိရပါသညျ ။
ဖွဈစဉျမှာ သာယာဝတီမွို့နယျ အိုငျကဒုံ ကြေးရှာ အုပျစု ကညငျတပငျ ကြေးရှာတှငျ မောငျနှမ ( ၂ ) ဝမျးကှဲ တျောစပျသူ မောငျမိုးဝငျး မှ ညီမ ဖွဈသူ မလှငျမာခြို ( ခ ) မီးလေး ကို ၂၇ - ၄ - ၂၀၁၇ ရကျနညေ့ (၇ )နာရီ အခြိနျ့ တှငျ အဖိုး ( အဘေး ) ဖွဈသူ ဦးခဈြရှေ နှငျ့ နထေိုငျသော မလှငျမာခြို အား ဗီဒီယို ကွညျ့ရနျ အတှကျ အဘိုးဖွဈသူ အား ယုံကွညျအောငျ ပွောဆိုပွီး ၊ ဆိုငျကယျဖွငျ့ တငျကာ ရှာ၏ အနောကျဖကျ မှ ထှကျသှားခဲ့ပွီးနောကျ မွဈကြိုးကြေးရှာအုပျစု နှငျ့ အိုငျကဒုံ ကြေးရှာ အုပျစုကွား တျောပဲခူး အငျးဖြား ရှိ ပေါကျပငျ အနီးတှငျ ရပျကာ အနီးရှိ ကိုငျးတော ထဲသို့ တှနျးလဲပွီး သား /မယား ပွုကငျြ့ ခဲ့သညျ။
သား / မယားပွုကငျြ့စဉျ အျောဟဈ အကူအညီ တောငျးသဖွငျ့ လညျပငျးကိုညှဈခဲ့ပွီး သား /မယား တဈကွိမျ ပွုကငျြ့ရာ လညျပငျးညှဈ သော ဒဏျကွောငျ့ လညျစီပွုတျ မမြေ့ော သှားခဲ့ပွီး နောကျသတိရရငျ တိုငျကွားမညျ ကို စိုးရိမျ သဖွငျ့ အနီးရှိ မွကွေီးခဲ ဖွငျ့ ဦးခေါငျး ကို ထုသဖွငျ့ သဆေုံးသှားပွီးနောကျ ပွနျလာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
၃ - ၅ - ၂၀၁၇ ရကျနေ့ နံနကျ ၇နာရီ ကြျော အခြိနျခနျ့တှငျ ကညငျတပငျ ရှာသား ကိုစိုးသိနျးမှာ ဝါရိုး ခြိုးရနျအတှကျ ရှာမှ ထှကျ ခှာလာရာ အပုတျ နံသဖွငျ့ ကိုငျးတောအနီးရှိ ရှာကွညျ့ရာ လူသေ အလောငျးတှရှေိ့သဖွငျ့ အနီးအနားရှိ ကိုဖိုးသောကွာ အား ချေါယူပွီး အတူ ထပျမံကွညျ့ရှု့ရာ လူသေ အလောငျးတှသေ့ဖွငျ့ အိုငျကဒုံကြေးရှာ အုပျခြုပျရေး မှူး ဦးကြျောမွငျ့ကို ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျ အကွောငျးကွားရာ အုပျခြုပျရေးမှူးမှ စံရှေး နယျမွေ ရဲစခနျးမှ ရဲအုပျ ဝငျးနိုငျ နှငျ့အတူ ကညငျတပငျ ကြေးရှာ သို့ ထှကျခှာ လာခဲ့သညျ ။ ကြေးရှာနေ ပွညျသူမြားမှာလညျး မသင်ျကာစရာ ဖွဈသူ မောငျမိုးဝငျးကို ပွောသဖွငျ့ ချေါယူမေးမွနျးရာ ငွငျးဆနျးနသေျောလညျး ရဲတပျဖှဲ့ စဈဆေးရေးဗြုဟာ စကျဝနျးကို မလှနျဆနျ နိုငျကာ ဥပဒေ လကျတှငျးသို့ သကျဆငျးကာ (၁၅ )မိနဈ အတှငျး မေးမွနျးဖျောထုတျ နိုငျခဲ့သညျ ။
ပွဈမှု့ ကြုးလှနျခဲ့သူ ကိုမိုးဝငျးကို အခငျးဖွဈရာ အရပျ သို့ လိုကျလံပွသရနျ အတှကျ ပွောဆိုရာ တှငျ စခနျးမှူးရဲအုပျ ဝငျးနိုငျ နှငျ့အတူ အိုငျကဒုံ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကြျောမွငျ့ မွဈကြိုး အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးအောငျမွငျ့အတူ လိုကျပါကာ အခငျးဖွဈနရော အား ပွသပွီးနောကျ အလောငျးဖျေါနခြေိနျ တှငျ မလှငျမာခြို ( ခ ) မီးလေး အား သူ့ အနဖွေငျ့ မတရားပွုကငျြ့ပွီး သတျခဲ့ကွောငျး အုပျခြုပျရေးမှူးနှဈဦးရှမှေ့ောကျတှငျ ဝနျခံပွောဆိုခဲ့သညျ ။
အဆိုပါ ပွဈမှု့. ကို ကြုးလှနျ ခဲ့သော ကိုမိုးဝငျးကို စံရှေးနယျမွေ ရဲစခနျးမှ ပ/ ၂၃ / ၂၀၁၇ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ၃၀၂ /၃၇၆ ဖွငျ့အရေးယူနိုငျ အတှကျရဲအုပျ ဝငျးနိုငျ မှ အမှု့ကိုသခွော စဈဆေးပွီး တရားစှဲဆိုနိုငျရနျ စီစဉျဆောငျရှကျ ရှိသညျ ။
သဆေုံးသူ မလှငျမာခြို အခွခေံပညာ နဝမတနျး ကိုအောငျမွငျပွီး ယခု နှဈ စာသငျ နှဈ ဒသမတနျးကိုတကျရောကျ သငျကွားမညျ့ ကြောငျးသူတဈဦးဖွဈပွီး ကြောငျးအပို့အကွို ယခု ပွဈမှု့ကြုးလှနျ ခဲ့သူ ကိုမိုးဝငျးအား အပို့အကွို လုပျရနျ အဘေးဖွဈသူ ဦးခဈြရှေ မှ စီစဉျထားပွီး ကိုမိုးဝငျး မှာ ဆိုငျကယျကယျရီ မောငျးနှငျ သူတဈဦး ဖွဈသညျ ဟု အိုငျကဒုံကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကြျောမွငျ့ က မီဒီယာနှငျ့ တှဆေုံ့ခြိနျ တှငျပွောကွားခဲ့သညျ ။